DADKAYGOOW DULMIGA DAA
W/Tiriyey: Mursal Max'ed Max'uud(Garaad)
Dadka soomaaliyeed waxaa la sheegaa in ay yihiin Ummad hodan ka ah Suugaanta, iyagoo marka la doonayo in wax la tusaaleeyo ama la soo gudbiyo arin xasaasi ah, loo adeegsado qaab-suugaanayd, si ujeedaddu u noqoto mid taaba-gal ah isla markaasna loo qaato sidii la doonayey.
Sidaas darteed waxaan jeclahay in aan soo bandhigo Maansadaan Dadkaygoow Dulmiga-daa, xili ay Collaado ka socdaan Deegaano ka tirsan Goboladda Mudug iyo Galgaduud ee Somalia, halkaas oo ay isku dilayan dad walaalo ah. Waxaan aad u jeclaan lahaa in Dadkaasi ay Xabadda iska dhigaan layskuna layn Dhalinyaradda berito uu Dalku u baxsan lahaa, sidoo kale waxaan ka codsanlahaa in dhinacyadda dagaalamaya ay u dhega nuglaadaan fariimaha wax-garadka Soomaaliyeed.
Maansadaan waxaan tiriyey 10kii june 2004, walloow aanan soo bandhigin.Waxaa cad in dhibaatadda nahaysatadda uu Dulmigu sal dhig u yahay, innagoo iska dhega tirnay Qowlka AIlaah, S.W.T ku leeyahay "Dulmiga waxaan ka xaaraan tinimeeyey Naftaydda, dhexdiinana waxaan ka dhigay mid xaaraam ah, ee ha is dulminina". Sidaas darteed ayaana ugu doortay in aan gun-dhig uga dhigo Maansadaydda dhibaatadda Dulmiga. Hadaba waxaan uga hadli doonaa ama aan ku cabiri doonaa Cirib xumidda uu Dagaalku ku keeno dhinacyadda dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashadda, nolosha dadka iyo weliba in ay ka imaan karto caradda Eebe anigoo marka ugu danbeeysana ku soo afjari doona qayb Duco ah. Maansaddiina waa iga tan.
Daacadnimo ka durugiyo
Damqashadda xanun kale
Madfac loogu Deeqaa
Waa Diin la'aan iyo
Daa'inbaa ka digayoo
Naftiisuu ka diidee
Dadkaygoow Dulmiga daa.
Duulba duul ku duulkiyo
Dilkan wada banaanee
Midna aan ladaynayn
Danbi weeye culusoo
Diintu nama faraysoo
Min digteetar Dagaal oog
Umul-dooxu nama dayn
Dakadahoon shaqayn iyo
Dalaga ooynan beeran
Dib u dhacoo balaartiyo
Waa Dabar go'eenee
Hadaan diidnay Qaranimo
Kala dirnay Xooggii
Aqoonyahan la dayriyey
Jahligana la daba kaco
Daka yaa u maqanoo
Dalka yaa iska lahoo
Difaac uga noqon kara
Nabad loo dalxiistago
Aqoon durugtay weeyee
Diiwaanka geli taaas
Dulibaan ka dooranay
Dawarsibaan daw moodnay
Dusha sare ka fiiqane
Maku sheegay Dulucddii
Bogsan waysay Muddo badan
Dawadii ma doonaa
Hayga diidin maantee
Dacwadaydda iga maqal.
Dibadaha u yaacay
Darxumay ku joogaan
Degel Nbad ah Eeboow
Dowladnimadii soo celi.
Collaad waan ka daalne
Dadkaygoo is raacoo
Qolo qoladda diidoo
Dowladnimo u jeestaan
Dowladnimaddii soo celi.
Haddii uu khaladaad uga soo baxo Maansayanahanadda Somaaliyeed, gaar ahaan xagga isa-saarka, yaanay ii ciishoonin waan ka raali gelinaya, waayo ma ihi Maansayahan Wanaagsan balse waxaan ka damqanayaa Dadkaas Soomaaliyeed ee is laynaya, xilli ay tahay i Collaadaha Somalia ka jiray la soo afjaro.
W/Tiriyey: Mursal Max'ed Max'uud(Garaad) Email: stethy1@yahoo.com
Dawladdii Cali Maxamed Geeddi oo oo La Casiley
iyo Afhayeenka dowladda FKMG oo sheegay inaan waxba ka jirin go'aankii Baarlamaanku ku riday xukuumaddii Geeddi.. Guji... Dec 11